စျေးပေါသော LitePanels အခြားနည်းလမ်း? Zabolight LED ၏သုံးသပ်ချက်တစ်ခု ... | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » စျေးပေါ LitePanels အခြားရွေးချယ်စရာ? အဆိုပါ Zabolight LED မီးတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ...
ပူ ARRI နှင့်ဝယျလျအလင်းအိမ်သုံးပြီးနှင့်ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုသည့်အခါ LitePanels ငှားရမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကျွန်မအများကြီးစျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ LED ပြားနှင့်အခြားလ်တာအောင်ခဲ့ Zabolight လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယခင်: Myers ProTrack ၏နောက်ဆုံး Edition ကိုအတူ CCW 2013 ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည် ...
နောက်တစ်ခု: Smart TV | မီဒီယာလက္ခဏာတွေ Meredith Post-Newsweek တီဗီ Accelerated ...